China akwa njupụta Cleaner azụmahịa oké adịghị ọcha YF-Zcs 58 57 56 factory na suppliers | YUNFENG
akwa njupụta dị ọcha na nnukwu adịghị ọcha YF-Zcs 58 57 56
High Consistency pulp Cleaner / Desander Separator / Sand Remover / Sand-Catcher Nkọwa ngwaahịa: HD cleaners bụ nnukwu dayameta na-aga n'ihu ndị na-ehicha nwere ike ịhazi ọtụtụ narị tọn eriri kwa ụbọchị. Isi ebumnuche nke ndị na-ehicha elu dị elu bụ ikewapụ ndị na-emerụ emerụ site na eriri na nkwusioru nke eriri n'ime mmiri .Nke a na-echebe akụrụngwa mgbada site na iyi na oke mbibi. Enwere ike iji ha maka mgbake eriri. A abụọ cone elu njupụta Cleaner pulp bụ elu Puri ...
High-agbanwe agbanwe pulp Cleaner / Desander separator / Aja Remover / Aja-nwuchi
Ndị na-ehicha HD bụ nnukwu dayameta na-aga n'ihu na-ehicha nwere ike ịhazi ọtụtụ narị tọn eriri kwa ụbọchị. Ebumnuche dị elu nke ndị na-ehicha elu bụ ikewapụ ndị na-emerụ emerụ site na eriri na nkwụsịtụ nke eriri mmiri. Enwere ike iji ha maka mgbake eriri.
A abụọ cone elu njupụta Cleaner pulp bụ elu ọcha na akụrụngwa, karịsịa na asacha nke n'efu akwụkwọ pulp mma, ọ bụ otu n'ime ndị isi akụrụngwa nke n'efu akwụkwọ imegharị ihe iji megharịa dị oké mkpa. Ọ na-eji eriri dị iche iche na akụkụ nke adịghị ọcha, nke mere na ụkpụrụ nke nkewa nke centrifugal nke adịghị ọcha dị ukwuu site na pulp iji mee ka ebumnuche pulp ahụ dị ọcha. Ngwaọrụ ahụ na-eji obosara, ma maka nsụgharị dị elu na-eme ka ọ dị ọcha. Tupu igwe nwekwara ike-eji maka ala anọgidesi pulp cull ọcha.
The Cleaner dị mfe, obere akara ukwu, nnukwu ikike, akpaaka nwere ike debug mfe slagging ọrụ. Clogging tap tinyekwa, dị ọcha na oru oma, otu oge naanị site Cleaner slurry, slurry njikwa akụrụngwa na-agaghịkwa achọ ọdụ, obere eriri ọnwụ. Cone na-eyi na ogologo ndụ: enweghị mbanye, enweghịzi mmezi, e nwere ụdị abụọ nke akpaka na ntuziaka.
Igba m3/ Nkeji
Nhazi ikike t / d
High anọgidesi Cleaner na-bụ-eji wepụ obere na arọ adịghị dị ka ígwè, akwụkwọ ntu, uyi, ájá, cullet na na. Ebumnuche nke ịmịchaa abrasion akụrụngwa, nhicha pulp na mmelite mma ga-enweta.
1. pipenụrụ udia na otu akụkụ nke uche ga-etolite ike dị egwu nke vortex iji kewaa oke adịghị ọcha nke ọma.
2. Cone ahu adiaha alumina eyi eguzogide seramiiki nke ana achi achi ogologo oge bara uru.
3. Abụọ-cone Ọdịdị na-ebelata eriri ọnwụ mgbe bulie oké adịghị ọcha nkewa arụmọrụ.
4. Onye PLC na-ejikwa sistemụ arụmọrụ, na-achịkwa akụ na ụba na akụrụngwa.
Nke gara aga: 133 Pulping akụrụngwa Low njupụta Cleaner, Pressure Screen
Osote: Ndị na-ehichapụ ihe dị iche iche dị iche iche (wax, plastik, na osisi ndị ọzọ.)
Hd Cleaner High Oru oma
High-agbanwe agbanwe pulp Cleaner